𝐖𝐎𝐑𝐃 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐄𝐄𝐊 – 𝐀𝐆𝐈𝐋𝐈𝐓𝐘𝐀𝐆𝐈𝐋𝐈𝐓𝐘 ဆိုတာ ဘာလဲ။
𝐖𝐎𝐑𝐃 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐄𝐄𝐊 – 𝐀𝐆𝐈𝐋𝐈𝐓𝐘
𝐀𝐆𝐈𝐋𝐈𝐓𝐘 ဆိုတာ ဘာလဲ။
• 𝐀𝐆𝐈𝐋𝐈𝐓𝐘 (လျင်မြန်သွက်လက်မှု) ဆိုတဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းကို ၁၅ ရာစုနှစ်မှာ စတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ အသုံးများတဲ့ 𝐀𝐆𝐈𝐋𝐈𝐓𝐘 ဆိုတာကတော့ စီးပွားရေးအခြေအနေတစ်ရပ်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန် သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ရှိရင်းစွဲ အခြေကျနေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို မြန်မြန်တုံ့ပြန်နိုင်မှုကို ဆိုလိုပါတယ်။
• နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ စားသုံးသူများ တောင်းဆိုသည့် လိုအင်ဆန္ဒများဖြစ်သော ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှု၊ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ကုန်ပစ္စည်းများကို အရင်မူလအတိုင်း တည်ရှိစေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုလည်း 𝐀𝐆𝐈𝐋𝐈𝐓𝐘 အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါတယ်။
• ပြောင်းလဲလာတဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်ရဲ့အလုပ်မှာရှိတဲ့ လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေကို သေချာအသုံးချပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကိုလည်း𝐀𝐆𝐈𝐋𝐈𝐓𝐘 လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
“Every time the size ofacity doubles innovation and productivity per resident increase by 15 per cent. But when companies get bigger, innovation and productivity per employee generally go down.” —Tony Hsieh, CEO, Zappos.
နယူးဇီလန် အခြေစိုက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လက်မှတ်အရောင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Snapper” ကုမ္ပဏီရဲ့ Business Agility ကို ဘယ်လိုမျိုး အကျိုးရှိစွာ အသုံးချသွားပုံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Snapper ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးဟာ လုပ်ငန်းစတည်ထောင်ချိန်ကစပြီး အားလုံး တက်ညီလက်ညီနဲ့ အလုပ်တာဝန်များကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လုပ်ငန်းကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ယခင်လိုမျိုး လုပ်ငန်းတွင်း ပြောဆိုဆက်ဆံရာမှာ ပြေပြစ်မှုမရှိတော့ဘဲ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပေးပို့မှု နှောင့်နှေးကာ တူညီသော အလုပ်တစ်ခုကို လူနှစ်ယောက် လုပ်ကိုင်နေကြတာကို တွေ့ရှိလာရပါတယ်။
ထိုအခြေအနေများကို ရိပ်မိတာနှင့်တပြိုင်နက် Snapper အဖွဲ့သားများဟာ ယခင်ကရှိခဲ့တဲ့ ရုံးတွင်းဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းအချိတ်အဆက် ယဉ်ကျေးမှုကို ပြန်လည်ရရှိစေရန်၊ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဆက်ဆံရေးတွင် ကြုံတွေ့နေသည့် အနှောင့်အယှက်များကို ဖယ်ရှားရန် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
အရင်အခြေအနေ ပြန်လည်ရရှိအောင် အဓိကအချက် (၂)ချက်ကို အလေးထားပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
(၁) တူညီတဲ့ ရည်မှန်းချက်ထားရှိပြီး အဖွဲ့လိုက်အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တက်ညီလက်ညီဖြင့် တူညီစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း
(၂) တစ်ယောက်တည်းမှ တာဝန်သုံးလေးခု မယူဘဲ အဖွဲ့လိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ခွဲဝေလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အစွမ်းအစအသစ်များကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Snapper အဖွဲ့သားများဟာ ယခင် လုပ်ငန်းတွင်း အလေ့အထများ ပြန်လည်ရရှိကာ အဖွဲ့သားအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ပြီး ယခင်ကထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကျိုးရလဒ်များကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ယခုဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရုံးတွင်းဆက်ဆံရေးတွင် မည်မျှပင် အပြတ်အတောက်ရှိစေကာမူ သိသိချင်း လျင်မြန်စွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ကာ Aglitiy ကို ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကြောင့် Snapper အဖွဲ့သားများအတွက် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို ရရှိခဲ့သော အကြောင်းအရင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
The first known use of 𝐀𝐆𝐈𝐋𝐈𝐓𝐘 was in the 15th Century.
Business 𝐀𝐆𝐈𝐋𝐈𝐓𝐘 is the ability ofabusiness system to rapidly respond to change by adapting its initial stable configuration and can be sustained by maintaining and adapting goods and services in meeting customer demands, adjusting to the changes inabusiness environment, and taking advantage of available human resources.
“Every time the size ofacity double, innovation and productivity per resident increase by 15 per cent. But when companies get bigger, innovation and productivity per employee generally go down.” —Tony Hsieh, CEO, Zappos.
There wasacase study about business agility at the company named "Snapper",aNew Zealand based transport ticketing service provider. At first, all of the team members from different departments worked together and corporated together without no communication leakage. Later on, the communication flows weren't always the same as they were supposed to be. Teams working duplicated work and they were not being informed about what they really need to do and what job was being assigned.
As soon as they found out the communication wasn't going well and not being productive in assigned tasks, the Snapper team tried their best to amplify the communication culture and remove the barriers when communicating among teams. There were two points on how they get back to their normal state.
(1)They decided to focus towards one equal goal to each team and madeafinal decision when they sat for the meeting with the team.
(2) They decided to split work into smaller roles instead of one team member taking three to five job roles. They assigned to the most appropriate person, allowing them to develop new skills.
Years later, Snapper team get back to their old structure and the communication between teams improve better and more productive than before.
This shows no matter there isagap and communication barrier among teams, the Snapper team madeaquick response by adapting the initial condition within the company which means business agility is the fact that the company should consider as the first priority.